भारतलाई चिढ्याउने गतिविधि सरकारले गरेको भन्दै डा. भट्टराईको आक्रोश – Sandes Post
मुख्य पृष्ठ /News/भारतलाई चिढ्याउने गतिविधि सरकारले गरेको भन्दै डा. भट्टराईको आक्रोश
काठमाडौं, जेठ ७ पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले वर्तमान सरकारले भारतलाई चिढ्याउने गतिविधि गरिरहेको आरोप लगाउनु भएको छ । नेपालले आफ्नो भूमिसहितको नक्सा सार्वजनिक गरेपछि दुई देशका बीचमा बहस चलिरहेका बेला उहाले सरकारको गतिविधि ठीक नभएको बताउनु भएको हो ।
भारत र चीनसँग राम्रो सम्बन्ध विकास गर्न सकेको खण्डमा अवसर आउने बताउदै डा. भट्टराईले भन्नुभयो, ‘केही समय यताका हाम्रा गतिविधि, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको व्यक्तिहरुको कृयाकलापले त्यो अवसरलाई झन गुमाउने र त्रासदी थप्ने सम्भावना मैले देखेको छु ।’
१८ वर्षीया टीकारामकी पत्नीका आँसु अझैँ थामिएनन्, दुई वर्षीया छोरीलाई काखमा लिदै भक्कानिन्छिन्
थप २८८ जनामा कोरोना पुष्टि, संक्रमितको संख्या २०९९ पुग्यो
साउदीबाट नेपाल फर्किन इच्छुक नेपालीलाई दूतावासको यस्तो अनुरोध